के फरक धार ? के मुलधार ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsके फरक धार ? के मुलधार ?
के फरक धार ? के मुलधार ?
May 19, 2019 sutraentertainment Feature News, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेनमेन्ट – लुट फिल्म चलेपछि हो, नेपालमा फरक धारका फिल्म र मुलधारका फिल्म भनेर छुट्याइएको ।
यसैले पनि यो भाषा अहिले पनि बोलिएको छ । फरक धार कुन हो र मुलधार कुन हो भनेर परिभाषा गर्नेहरु पनि छन् । तर, के दर्शकले फिल्म हेर्दा मुलधार र फरकधार भन्छन् त ?
शुक्रबार रिलिजमा आएका थिए, जात्रै जात्रा र विर विक्रम २ । यी दुई फिल्ममा कुन फरक धार हुन्, कुन मुलधार हुन् ? भन्न सकिएला ।
फिल्म जात्रै जात्रालाई दर्शक र समिक्षक दुबैले रुचाए । यो फिल्म दुबैले रुचाएपछि व्यापार पनि राम्रो गर्न सफल भएको छ । जात्रै जात्रालाई नराम्रो भन्न न दर्शकले सके, न समिक्षकले ।
विपिन कार्की, दयाहाङ राई जस्ता कलाकार भएपछि यस्ता फिल्मलाई नेपालमा फरकधारको भन्न थालिएको छ । तर, जात्रै जात्रा सबै धारको देखियो ।
विर विक्रम २ कुन धारको फिल्म हो ? नाजिर हुसेन हुँदा फरक धार, पल शाह हुँदा मुलधार । आखिर यो फिल्म कुन धारको हो ?
बुलबुललाई पनि फरक धारको फिल्म भनिएको थियो । फरकधारको फिल्म भएको भन्दै यसलाई समिक्षकले उच्च रेटिङ दिएका थिए । तर, यो फिल्म चलेन । न सिंगलमा चल्यो, न मल्टिप्लेक्समा । बुलबुल के साच्चै फरक धारको थियो ।
छक्का पन्जा ३ ले मल्टिप्लेक्सबाट नै बढी कमायो । यो फिल्मलाई त पुरै मुलधारको भनियो । तर, यो फिल्म जताततै चल्यो । ए मेरो हजुर ३ पनि जुनसुकै हलमा पनि उस्तै कमाई गर्न सफल भयो । यसलाई कुन धारको भन्ने ?
नेपालमा अहिले देखिएको ट्रेन्ड हेर्दा फिल्मको कुनै धार हुँदैन । फिल्म राम्रो र नराम्रो धारमा हुन्छ । दर्शकले मन पराएपछि त्यो फिल्म राम्रो धारको । दर्शकले मन नपराएपछि त्यो नराम्रो धारको ।
फिल्मलाई धार भनेर, मल्टिप्लेक्सको भनेर वर्गिकरण गर्नु गलत हुन्छ । किनकी, फिल्म नै हो बनाउने । यसैले यो धार र त्यो धार भन्न गलत होला । हलमा फिल्म चलेपछि त्यसको धार हुन्न । कतिपय फिल्म महोत्सवका लागि बनाइन्छन् । तीनीहरुको परिभाषा आफ्नो होला ।
फिल्मलाई धारमा वर्गिकरण नगर्दा राम्रो हुन्छ । धार भन्दा पनि दर्शक सुहाउँदो फिल्म बनाउन आवश्यक छ । फेरि मेरो फिल्म सिंगल र मेरो फिल्म मल्टिप्लेक्स भन्नु पनि गलत सोच हो । किनकी, फिल्म बनाइसकेपछि दर्शकको वर्गिकरण गर्नु न्यायसंगत नहोला ।
nepali main stream movie
sutra entertainment nepali movie
यस्तो छ ‘जात्रै जात्रा’ को दुई दिने कलेक्सन